Cittasukha Myanmar Monastery (Korea) Cittasukha Myanmar Monastery (Korea): စိတ္တသုခကျောင်းတော် နှစ်ပတ်လည်ပွဲ နွှဲကြမယ်
စိတ္တသုခကျောင်းတော် နှစ်ပတ်လည်ပွဲ နွှဲကြမယ်
မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလကို ရောက်ရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒီနှစ် နှစ်ကူးအထိဆိုလျင် ကျနော်တို့ စိတ္တသုခကျောင်းတော်ကို တည်ထောင်လာခဲ့တာ (၄) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ခါတိုင်းနှစ်တွေလိုပဲ ကျောင်းနှစ်ပတ်လည် အလှူပွဲတော်ကို အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနှစ်မှာလည်း ဆုံဆောလူငယ်များကပဲ ပင်တိုင် ကမကထပြုပြီး ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ကျန်တဲ့ စက်မှုဇုံအသီးသီး .. နေရာဌာန အသီးသီးက ကုသိုလ်ရှင်များကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင် အားဖြည့်ကြဖို့ အသင့်ရှိနေကြပါတယ် ။
ကျောင်းနှစ်ပတ်လည် ပွဲတော်ကို ကိုရီးယားနှစ်သစ်ကူး ရက်များဖြစ်တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ( ၉ ၊ ၁၀ ၊ ၁၁ ) ရက်တို့အတွင်းမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ကျင်းပမယ့် ရက်အတိအကျကို ထပ်မံတင်ပြပါမယ် ၊ နှစ်သစ်ကူးရက်မတိုင်မီမှာ ဆရာတော်ဟာ ပြန်လည် ကြွရောက်လာမှာဖြစ်ပြီး ၊ ဒီနှစ်မှာလည်း အစဉ်အလာကောင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ အခြားလူမှုကူညီရေး အစီအစဉ်တစ်ခုကို လှူဒါန်းဖို့အစီအစဉ် ရှိပါတယ် ၊ ဆရာတော် ကြွရောက်လာတဲ့အခါမှာ လှူဒါန်းမယ့်နေရာနဲ့ အစီအစဉ် အသေးစိတ်ကို အတည်ပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျနော်တို့ စိတ္တသုခ မိသားစုဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို ပြုလုပ်နေရင်းနဲ့ တစ်ဖက်မှာ ခေတ်အလှူတွေဖြစ်တဲ့ လူမှုရေး အကူအညီတွေကိုလည်း အခါအခွင့်သင့်သလို ပြုလုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ဘယ်လို ရှုထောင့်ကပဲ ကြည့်ကြည့် ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျနော်တို့ရဲ့ကျောင်းတော်ဟာ ဆုံဆော ၊ ဂျီလျန်းဂယောင်ဆန် ၊ ဒါဆန်း ၊ ယုံရှင်းဝဲဂန် ၊ ယုံအန်း ၊ နွံကုန်း ၊ ဂင်မဲ ၊ ဂယောင်ဂျူး ၊ ပိုဟန်း ၊ အူလ်ဆန်း စတဲ့ နေရာအသီးသီက ရွှေမြန်တွေရဲ့ အားပေါ်မှာ အခြေပြုပြီး တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ၊ သို့သော်လည်း ဆရာတော်ရဲ့ ဆွမ်းကွမ်း ဝေယျာဝစ္စ ၊ ကျောင်းဗာဟီယကိစ္စ ရေပိုက်ပေါက်တာ မီးကြိုးသွယ်တာ ပန်ကာတပ်တာ ကော်ဇောဝယ်တာ အမှိုက်သွန်တာကအစ အလှူပွဲတွေမှာ ချက်ပြုတ်တာအဆုံး အဆုံး တကုန်းကုန်းနဲ့ သိမ်းကျုံး တာဝန်ယူပြီး လုပ်ပေးနေကြရတာက ဆုံဆော လူငယ်များသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့တွေဟာ လုပ်အားနဲ့ လုံ့လ၀ီရိယမှာ ပိုသာတယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ တကယ်တော့ တာဝန်သိစိတ်နဲ့ သဒ္ဓါတရားကို ပေါင်းစပ်ပြီး လုပ်ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျနော်တို့ဇုံဆိုရင် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိနေတော့ ကျောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေမှာ ကျနော်တို့အတွက် သက်သက်သာသာ နေခွင့် ရနေတော့ ၊ အင်း သူတို့ရှိနေပြီး အခုလို လုပ်ပေးနေကြလို့ တော်သေးတာပေါ့ လို့ အမြဲပဲတွေးပြီး ကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ် ၊ အဲဒါကြောင့်ပဲ ဆုံဆောက သူငယ်ချင်းတချို့ နည်းနည်းဝေးတဲ့ နေရာတစ်ခုကို အလုပ်ပြောင်းမယ်ဆိုလျင်တောင် ကျနော်တို့မှာ အားလျော့သွားသလိုမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် ၊ မြန်မာပြည်ကို ပြန်တော့မယ်လို့ ကြားရတဲ့အခါမျိုးမှာဆို ၀မ်းသာမှုနဲ့ နှမျောတသ လွမ်းဆွတ်မှု ခံစားမှုနှစ်ခုကို အမြဲရလေ့ရှိပါတယ် ၊ ၀မ်းသာတာကတော့ ပြန်မယ့်သူငယ်ချင်းဟာ သူချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိုးမကွာ အိမ်မကွာနေရတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မုဒိတာစိတ်နဲ့ ၀မ်းသာခြင်းပါ ၊ ၀မ်းနည်းမှုစွက်တဲ့ နှမျောတသမှု ကတော့ ဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အလုပ်တွေအတူတူ လုပ်ခဲ့ကြတယ် ၊ ကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေကို သယ်ပိုးခဲ့ကြတယ် ၊ မကြာမကြာလည်း တွေ့နေကြတော့ ရဲဘော်ရဲဖက်စိတ်နဲ့ ထုံးဖွဲ့လာတဲ့ သံယောဇဉ် အမျှင်တန်းကြောင့်ပါပဲ ၊ “ကောင်းကင်ကို” ရဲ့ “သံယောဇဉ်” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်ရတယ် “သံယောဇဉ်ဆိုတာ မွေးရင်းရလာတဲ့အနာ ၊ တွေးရင်းလှလာတဲ့ကဗျာပဲ” တဲ့ ၊ ကျနော်ကတော့ လှလာတဲ့ ကဗျာလို့ပဲ အမြဲမှတ်ပါတယ် ။
လွမ်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို စောကြောရင်း အယူအဆတစ်ခုကို ဆွဲထုတ်ကြည့်မိပါတယ် ၊ ကျနော်တို့တတွေဟာ နေရာတစ်ခုကနေ အခြေအနေ တစ်ခုခုကြောင့် ခွဲခွါသွားကြရတဲ့အခါ အဲဒီနေရာမှာ ကျန်ခဲ့မယ့်သူတွေကို လွမ်း..နေရစ်ခဲ့အောင် လုပ်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ် ၊ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့နဲ့ နီးစပ်ရာ နေရာ အသိုက်အ၀န်းတစ်ခု အတွက် ကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေကို သယ်ပိုးခဲ့ကြတယ် ၊ ချစ်ခင်ရင်းနှီး ရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ခွဲခွါသွားတဲ့အချိန်မှာ လွမ်းလို့ကျန်ရစ်ခဲ့ကြမှာ အသေအချာပါ ၊ တကယ်လို့သာ လေညာမှာ နေသာသလို နေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ “လွမ်းလောက်စရာ မရှိပါဘူး” ဆိုတဲ့စကားဟာ ကျနော်တို့အတွက်ပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့ ။ ကဲ အဲဒီတော့ ပြန်သွားတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ရဲဘော်တွေ ၊ လွမ်းအောင် စွမ်းခဲ့ကြသူတွေကို လွမ်းတယ်လို့ ပြောရင် ပိုတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတော့ မလားဗျာ ..
ကျနော်တို့မှာ အားကိုးရတဲ့ အကျိုးတော်ဆောင် တချို့ ပြန်သွားတဲ့အတွက် အားပျက်ရတာတွေ ရှိသလို ၊ တက်ကြွပြီး သဒ္ဓါတရား အားကောင်းတဲ့ လူယဉ်ကျေး လူငယ်လေးတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်လာတဲ့အတွက် အားတက်ရတာတွေလည်း ရှိပါတယ် ၊ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ စိတ္တသုခ ကျောင်းတော်ကြီးကတော့ စဉ်ဆက်မပြတ် အားကောင်းမောင်းသန်နဲ့ ဆက်လက်ချီတက် နေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ် ၊ ကျနော်ကတော့ ဘယ်နေရာကိုပဲ ရောက်ရောက် ဟောဒီ စိတ္တသုခရဲ့ Network ၊ စိတ္တသုခရဲ့ မိသးစုကွန်ယက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ။ ဆုံဆောအုပ်စု သူငယ်ချင်းတွေ ရှေ့ဆုံးကပြေးနေသလိုပါပဲ ဂယောင်ဆန်ဂျီလျန်း ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ တကယ့်အားထားရာပါ ၊ စိတ္တသုခရဲ့ “၀မ်း” လို့ တင်စားရင်လည်း မမှားလောက်ပါဘူး ၊ ဒါဆန်းကလည်း စုစည်းပြီး အားကောင်းလာလိုက်တာ လွန်ပါရော ၊ ပအို့ဝ် ပလောင် မွန် ဗမာ ရခိုင် ရှမ်း တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ဒါဆန်းမှာ တွေ့မြင်နိုင်ကြပါတယ် ၊ သူတို့တွေ ချစ်ခင်စည်းလုံးပြီး တက်ကြွနေကြတာ မြင်ရသူတွေကိုတောင် ရွှင်လန်းရစေပါတယ် ၊ ယုံရှင်းဝဲဂန်က..ရော ၊ သူကလည်း ပါလေရာ ငါးပိချက် ဘာဟင်းချက်ချက် ငါးပိချက်လေးပါမှ ထမင်းမြိန်သွားသလိုပါပဲ ၊ အဲဒီလိုမျိုးတွေ ရှိနေလေတော့ ကျနော်တို့တတွေ လူမများပေမယ့် အားရှိနေတာတော့ အမှန်ပါပဲ ။
ဒါတွေက ကျနော်တစ်ဦးတည်းရဲ့ အမြင် ၊ ခံစားချက်တွေ ချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ စိတ္တသုခ မိသားစုများ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးရဲ့ အမြင်များလည်း ထင်ဟပ်နေပါလိမ့်မယ် ၊ သူငယ်ချင်းများ အချင်းချင်း ကျောင်းတော်ရဲ့ ရေရှည်တည်တံ့ရေး ၊ တိုးတက်ရေး တို့ကို ဆွေးနွေးမိကြတဲ့ အခါတိုင်း ပြောဖြစ်ကြတဲ့ အရာများသာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မြန်မာတွေအတွက် အခုတလော ခေတ်စားလာတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုရှိပါတယ် ၊ အဲဒါကတော့ “ပြိုင်တူတွန်းလျင်ရွေ့နိုင်ပါသည်တဲ့” အတူပူးပေါင်းပြီး အားစိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါ အရွေ့တစ်ခု ၊ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ ၊ ကျနော်တို့ စိတ္တသုခကျောင်းတော်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့ ရွေ့ယုံတွင်မကတော့ပဲ အရှိန်တောင်ရနေပါပြီ ၊ အရှိန်မပျက်အောင် ဆက်တွန်းပေးနေဖို့သာ လိုပါတော့တယ် ၊ နိုင်ငံတစ်ခုမှာပဲ ဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပဲ ဖြစ်စေ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးဦးကို ရထားပြီဆိုရင် နောက်လိုက်တွေက စည်းစည်းလုံးလုံး နဲ့ အားစိုက်ပြီး ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုပါတယ် ၊ ဒါမှသာ အကျိုးကျေးဇူး များမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို နမူနာတင်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ် ၊ အခု ကျနော်တို့ စိတ္တသုခ ကျောင်းတော်မှာလည်း ဆရာသမားကောင်းကို ရထားပြီးပါပြီ ၊ ကျနော်တို့ဘက်က စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးအားဖြည့် ပေးဖို့သာ လိုပါတော့တယ် ၊ ဒါကြောင့်မို့ နောက်ဆုံး ကျနော်ပြောချင်တာက.. “သူငယ်ချင်းတို့ရေ ပြိုင်တူတွန်းလိုက်ကြပါဦးစို့” လို့ …………………….
နှစ်ပတ်လည်ပွဲအတွက် အလှူငွေများကို ဆုံဆောဇုံအတွက်
(၁) ကိုမင်းနိုင် (ဦးတပ်ပြီးရေးရင် အသက်ကြီးသလို ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့)
(၃) ကိုသူရအောင် (ကိုကာကာကြီး Star light မြန်မာဆိုင်)
(၅) ကိုဇင်ကိုအောင် .. တို့က စုစည်း လက်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
နှစ်သစ်မှာ သူငယ်ချင်းများအတွက် ..
Bonus တွေများများရ ၊ လစာတွေတိုး အမျိုးမျိုးရ
အလုပ်မှာ မပင်ပန်း ၊ အလန်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေ
အခြေအနေတွေကောင်း ၊ ကျောင်းအတွက် များများလှူ
မပူမပင်နဲ့အေးဆေး ၊ ကျနော် ၀င်းနိုင်ဦးကိုလည်း ကျွေးမွေးနိုင်ကြပါစေဗျာ ။
(မှတ်ချက် ။ ။ ရေးခဲ့တဲ့အထဲမှာ မပြေမချောတာတွေလည်းရှိမယ် ၊ လေဖေါတာတွေလည်းရှိမယ် ၊ ဒါပေမယ့် ရေမရောတဲ့ ခံစားချက်တွေသာ ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါတယ် )